Dahaarka saqafka birta ah wuxuu bixiyaa doorasho weyn oo loogu talagalay sawaxanka roobka ka dib marka la dhejiyo xumbo xumbo Meishuo, si dadku ay uga baxsadaan dhibka roobka ee ku dhacaya saqafka birta ah. Ka sokow, sida crosslinked xumbo gacanta xiran waxay leedahay waxqabad aad u fiican oo ku saabsan xakamaynta gariirka, iska caabinta qoyaanka iyo kulaylka marka ay taageerto bireed aluminium ah.
Dahaarka saqafka waa xumbo Meishuo ah oo lagu dhejiyay bireed aluminium ah oo dhinac ah ama laba-geesood ah oo loogu talagalay saqafka birta ee sagxadda hoosteeda/dahaarka saqafka hoostiisa. Dahaarka saqafka xumbo isku xidhan ayaa loo isticmaali karaa dhirta warshadaha, saqafka ganacsiga iyo saqafka daadsan, wuxuuna ku haboonaan karaa warshado kala duwan oo caalami ah. Dahaarka milicsiga ayaa xannibi kara qayb ballaadhan oo kulaylka iftiimaya ee uu helo qaab dhismeed.
Dahaarka xumbo-soo-saarka ayaa u dhaqmi kara sidii xannibaad ifaya oo ka tarjumaysa/ xannibi kara 95% kulaylka. Goobaha leh kulaylka qorraxda sare, tani waxay ka dhigaysaa wax soo saar ku habboon maadaama ay yarayso baahida AC ama ay hoos u dhigto heerka isticmaalkooda si ay u badbaadiyaan kheyraad badan oo raasumaal ah.
Ka ilaalinta xooggaaga shaqada xaaladaha kulaylka dibadeed way fududahay sidii hore. Dahaarka saqafka Meishuo kaliya ma dhimayo baahida unugyada qaboojinta ee bakhaarada, sidaas darteed badbaadinta raasumaalka laakiin sidoo kale waxay yaraynaysaa faa'iidada kulaylka dibadeed si weyn taas oo ka dhigaysa lamaanahaaga ganacsiga ugu fiican. Iska caabin kuleyl ah oo heer sare ah iyo awood lagu xaddido faafinta qoyaanka waxay keenaysaa korodhka cimriga qaab-dhismeedka iyo ka ilaalinta baabuurta inay waxyeello ka soo gaarto xaaladaha cimilada xun.
Maxaa ka sii badan, dahaarka saqafka birta ah wuxuu bixiyaa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay sawaxanka roobka ka dib marka la dhejiyo xumbo xumbo Meishuo, si dadku uga baxsadaan qaybinta roobka ee saqafka macdan ah. Ka sokow, sida xumbo-unugyada isku-tallaabta ah ee isku-xiran ay leedahay waxqabadka ugu wanaagsan ee xakamaynta gariirka, iska caabbinta qoyaanka, iyo dahaarka kulaylka marka ay taageerto bireed aluminium ah.
Marka loo eego shuruudahaaga gaarka ah, waxaan awoodnaa inaan u habeyno dusha sare ee baahiyo kala duwan, sida hal dhinac oo aluminium aluminium ah, biibiile aluminium ah oo laba dhinac ah, iyo hal dhinac oo aluminium ah oo lagu daray koolada kale. Ka sokow, dhumucdiisu waxay sidoo kale ka beddeshaa 5mm ilaa 10mm ama ka sii dhumucdiisuna, fadlan noogu soo dir e-mail: info@msfoam.com si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaaga jawaabno su'aalo dheeraad ah mid mid iyadoo ku saleysan dhammaan khibradeena. Weydiintaada si daacad ah ayaa loo filayaa.
● Heerka dabka iyo qiiqa sii daynta
● Uumiga biyaha eber iyo heerka nuugista biyaha oo hooseeya
● Hufnaanta kulaylka oo aad u wanaagsan
● Xumbo u roon deegaanka
● Kharashka kaydinta
Hore: Xumbo hoosteeda
Xiga: Dhuumaha qaboojiyaha hawada
Galinta xumbo baakadaha
Saxaarad xumbo ah oo ilkeed la tuuri karo
Xumbo nuuga naxdinta leh ee cawska macmalka ah